चीन उच्च गुणस्तर Alkyd तामचीनी निर्माता र आपूर्तिकर्ता - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > तेल आधारित रंग > Alkyd रंग > Alkyd Enamel
Alkyd तामचीनी रंग निर्माण गर्न सजिलो छ। यो कोठा को तापमान वा कम तापमान मा सुकेको हुन सक्छ। रंग फिल्म सफा गर्न को लागी सजिलो छ-लामो समय सम्म प्रयोग पछि, यो अझै पनी धुने पछि नयाँ जस्तै सफा हुन सक्छ।
फ्लैट प्रकाश/उच्च प्रकाश
ï¼ˆ ‰ ï¼ˆ4hï¼ˆ25â „ƒï¼
ï¼ˆ ‰ ï¼ˆ24hï¼ˆ25â ƒï¼ ƒï¼ ‰
¥ ¥ k 50kg/सेमी
mm mm mm2mm
‰ s ० को दशक
पूर्ण रूपमा ठोस
(30 माइक्रोन सूखी फिल्म को रूप मा गणना)
48hï¼ˆ25â ƒï¼ ƒï¼
ब्रश रंग बाधा मुक्त
Alkyd तामचीनी रातो, सुन्तला, पहेँलो, नीलो, हरियो, कालो, खैरो, फलाम रातो, खैरो श्रृंखला, सेतो श्रृंखला, हल्का नीलो श्रृंखला, आदि यो विभिन्न पुलहरु, इस्पात संरचनाहरु को सतह कोटिंग मा प्रयोग गरीन्छ सहित विभिन्न रंगहरु छन् , फलाम टावरहरु, वाहन उपकरण, विभिन्न इस्पात उपकरण र काठ उत्पादनहरु।
रातो, फलाम रातो र अन्य alkyd तामचीनी उज्ज्वल रंग, राम्रो आसंजन, उत्कृष्ट सजावट, विरोधी जंग र सुरक्षा कार्यहरु छन्, र अक्सर कन्टेनर को सतह मा लागू गरीन्छ।
सुन्तला, पहेंलो, नीलो, हरियो, हल्का नीलो र अन्य alkyd enamels उत्कृष्ट स्थिरता र एक्स्टेन्सिबिलिटी छ। कोटिंग फिल्म राम्रो एसिड, क्षार, नुन र मोल्ड प्रतिरोध छ। यो अक्सर मशीनरी र कृषि मशीनरी को सतह कोटिंग को लागी प्रयोग गरीन्छ।
सेतो श्रृंखला र अन्य alkyd तामचीनी रंग फिल्महरु कडा र लुगा प्रतिरोधी छन्, र राम्रो यांत्रिक गुणहरु छन्। तिनीहरूले इस्पात को सतह को लागी प्रभावी विरोधी जंग संरक्षण प्रदान गर्न सक्छन् र प्राय जहाजहरु को सतह मा चित्रित गरीन्छ।
कालो, खैरो, ग्रे श्रृंखला alkyd तामचीनी फिल्म लचिलो, राम्रो chromaticity र चमक, राम्रो इन्सुलेशन, बुढेसकाल छैन, सामान्यतया इस्पात संरचना, इस्पात उपकरण सतह कोटिंग मा प्रयोग गरीन्छ।
Alkyd तामचीनी अस्थिर, ज्वलनशील, र केहि विषाक्तता छ। क्रम मा उत्पादन को गुणस्तर लाई प्रभावित गर्न र दुर्घटनाहरु लाई रोक्न को लागी, हामी उच्च तापमान र सूर्य को जोखिम बाट बच्न को लागी एक सुख्खा र हावायुक्त ठाउँ मा उत्पादन भण्डारण गर्दछौं।
1. तपाइँको कारखाना मा धेरै उत्पादन लाइनहरु?
हट ट्याग: Alkyd तामचीनी, निर्माताहरु, आपूर्तिकर्ताहरु, थोक, किन्नुहोस्, कारखाना, अनुकूलित, चीन, सस्तो, छुट, कम मूल्य, छुट, मूल्य, उद्धरण, CE, फेसन, गुणस्तर, उन्नत, टिकाऊ, उत्तम दर्जेको